Qubanaha Archives - Page 2 of 2 - Sawirrotv
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 25-08-2016 (VIDEO)
August 25, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Qubaro Sheegtay in Badda Soomaaliya ay xoogani ku hayaan maraakiib shisheeye, hadii aan tan wax laga qabana ay keeni karto in markale ay dib u soo noqdaan burdacbadeedii Soomaaliya ee baaba’day. Cuni …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 19-08-2016 (VIDEO)
August 19, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Warbixin laga soo saaray qiimaha sare ee Korontada dalka Soomaaliya iyo cabasho ganacsatada Soomaaliyeed ee qubajoogta ah ay ku muujiyeen waraysiyo laga qaaday iyo saameynta guud ee koboco dhaqaale ee dalka. Filim laga suubiyay Qabaa’ …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 04-aug-2016 (VIDEO)
August 04, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Cabsi xoogan oo dhanka amniga ah oo la soo gudboonaatay dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka Ingariiska, waxayna kordhiyeen ciidamada hubaysan ee ku sugan goobaha muhiimka ah ee dalkaasi. Madaxweyne Barack Obama oo …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 28-july-2016 (VIDEO)
July 28, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Soomaalida ku nool dalka Maraykanka oo garab istaagi doona xisbiga dimoqoraadiga ee Hillayy Clinton Sheegayna inay dan ugu jirto in haweeneydani ay noqoto Madaxweynaha Dalka. Haweeneeyda lagu magacaabo Hillary Clinton oo qortay …
Maxaabiista Soomaalida ah ee ku Xiran Xabsiyada Dalka Masar oo Kor u kacday
April 28, 2016 – Dadka Soomaalida ah ee ku xiran Xabsiga lagu magacaabo (Xadra) ee dalka Masar oo ku yaala meel fogaan ahaan 30KM u jirta magaalada Alexandria ee dalka Masar ayaa gaaraya 180-maxabiis sida lagu sheegay warbixin ay daabacday mid kamid ah hay’adaha xaquuqda aadamaha u dooda ee ka howlgala dalkaasi. Dadkaasi maxaabiista ah ayaa …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 22-April-2016 (VIDEO)
April 22, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Faah Faahin ku saabsan dadkii Soomaalida ahaa ee ka badabaaday doontii ku Qalibantay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga. Nin dib uga soo laabtay Qurbaha oo Magaalada Muqdisho kula dhex wareega Boor ay …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 15-April-2016 (VIDEO)
April 15, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Heshiiskii ay dhawaan gaareen Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe ee Federaalka Soomaaliya. Suuq gaynta Xoolaha somaliland oo markii ugu horeysay hoos u dhac uu ku yimid, iyo qosy seexday Hoteel Dhalo ah oo ku …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 07-April-2016 (VIDEO)
April 07, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Warbixin ka hadlaysa nin indhaha iyo gacmaha ku waayay miino ku qaraxday oo ka hadlaya sida uu noloshiisa u maareeyo. Keith Ellison oo cogress-ka ka tiran oo ka hadlaya saameynta ay Muslimiinta Maraykanka ku …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 24-march-2016 (VIDEO)
March 24, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland oo ka soo kab sanaysa burburkii yo dhibaatooyonkii ka soo gaaray dagaaladii 20-ka sano ka badnaa ee uu dalka soo maray. Dowladda Belgium-ka oo Baaritaan ku wadda labadii …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 07-Jan-2016 (VIDEO)
January 07, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Ganacsato Soomaaliyeed oo maalgalin xoogleh ku suubisayay dalka Soomaaliya, iyagoo halkaasi ka dhisaya guryo tirobadan oo loogu talagalay qurbojoogta iyo cidwalba oo danayneysa inay ku noolaadaan magaalada Banaankeeda. Somaalida ku nool magaalada …